फ्रान्समा बाइबलको सत्य सिक्छन्‌ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
आन्टोइन स्कालेकी सानो छँदा तिनको एउटा घोडा थियो। त्यो नै तिनको साथी बन्यो। तिनी कोइला ढुवानी गर्ने काम गर्थे। यसको लागि तिनी आफ्नो घोडासितै ५०० मिटर गहिरो सुरुङको बाटो भएर आउजाउ गर्थे। आन्टोइनको बुबा कोइला खानीमा काम गर्दा गर्दै नराम्रोसित घाइते भएका थिए। त्यसपछि आन्टोइन दिनको नौ घण्टा कोइला खानीमा घोटिन बाध्य भए। एक पटक तिनले खानीमा झन्डै आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।
पोलिश कामदारहरूले प्रयोग गरेका औजार र सिन-ले-नोब्ले नजिकै रहेको डेशीको कोइला खानी, जहाँ आन्टोइन स्कालेकी काम गर्थे
सन्‌ १९२० देखि सन्‌ १९३० बीच पोल्याण्डका थुप्रै मानिस फ्रान्समा सरेका थिए। पोल्याण्डका अरू थुप्रै बच्चाजस्तै आन्टोइन पनि फ्रान्समै जन्मेका थिए। तर किन पोल्याण्डबासीहरू फ्रान्समा बसोबास गर्न थाले? प्रथम विश्वयुद्धपछि पोल्याण्ड स्वतन्त्र भयो। तर बढ्दो जनसङ्ख्या त्यहाँको समस्या हुन पुग्यो। यता फ्रान्सले भने युद्धमा १० लाखभन्दा धेरै मानिस गुमाइसकेको थियो, जसले गर्दा त्यहाँको कोइला खानीमा कामदारहरूको निकै आवश्यकता पऱ्यो। त्यसैले फ्रान्स र पोल्याण्ड सरकारबीच सन्‌ १९१९ सेप्टेम्बरमा बसाइँ सर्नेसम्बन्धमा एउटा सम्झौता भयो। सन्‌ १९३१ तिर फ्रान्समा पोल्याण्डका मानिसहरूको सङ्ख्या ५ लाख ७ हजार ८ सय पुग्यो। त्यसमध्ये धेरै जना उत्तरी फ्रान्सको कोइला खानी भएको इलाकामा बसोबास गर्थे।
पोल्याण्डका ती मेहनती कामदारहरूले आफूसँगसँगै आफ्नो संस्कृति र धार्मिक आस्था पनि फ्रान्समा भित्र्याए। अहिले ९० वर्ष पुगेका आन्टोइन यसो भन्छन्‌, “मेरो हजुरबुबालाई उहाँको बुबाले बाइबलका कुराहरू सिकाउनुभएको थियो। त्यसैले हजुरबुबा बाइबलको शिक्षालाई निकै आदर गर्नुहुन्थ्यो।” हरेक आइतबार कामदारहरू आफ्ना परिवारसितै राम्रो लुगा लगाएर पोल्याणडमा जस्तै चर्च जाने गर्थे। तर भौतिक कुरालाई महत्त्व दिने फ्रान्सेलीहरूलाई भने त्यो कुरा पटक्कै मन पर्दैनथ्यो।
थुप्रै पोल्याण्डबासीले नर्ड-पास-दे-कालेस भन्ने ठाउँमा पहिलो पटक बाइबल विद्यार्थीहरूलाई (अहिले यहोवाका साक्षीहरू) भेटे। ती बाइबल विद्यार्थीहरू सन्‌ १९०४ देखि त्यस इलाकामा जोसिलो भई प्रचार गरिरहेका थिए। सन्‌ १९१५ देखि पोलिश भाषामा हरेक महिना प्रहरीधरहरा पत्रिका छाप्न थालियो अनि सन्‌ १९२५ देखि सुनौलो युग (अहिले ब्यूँझनुहोस्!) पत्रिका उपलब्ध हुन थाल्यो। ती पत्रिकाहरूमा भएका बाइबलमा आधारित कुराहरू धेरैले सहजै स्वीकारे। साथै पोलिश भाषाको परमेश्वरको वीणा भन्ने किताबमा भएका कुराहरू पनि धेरैले मन पराए।
आन्टोइनको परिवारले बाइबल विद्यार्थीहरूको विषयमा तिनको मामाबाट सुनेका थिए। आन्टोइनको मामा सन्‌ १९२४ मा यहोवाका साक्षीहरूको सभामा पहिलो पटक उपस्थित भएका थिए। त्यही वर्ष बाइबल विद्यार्थीहरूले ब्रु-एन-आर्टोमा पहिलो पटक पोलिश भाषामा सम्मेलन आयोजना गरे। त्यसको एक महिना नबित्दै मुख्यालयका प्रतिनिधि जोसेफ एफ. रदरफोर्डले त्यही सहरमा आयोजना गरिएको जनसभामा २,००० जना उपस्थित भएका थिए। त्यस सभामा उपस्थित भएकाहरूमध्ये प्रायः पोलिश भाषा बोल्नेहरू थिए। यो देखेर भाइ रदरफोर्डले यसो भन्नुभयो, “यहोवाले तपाईंहरूलाई सत्य सिकाउन फ्रान्समा ल्याउनुभएको हो। अब तपाईंहरूले फ्रान्सका मानिसहरूलाई सत्य सिक्न मदत गर्नुपर्छ! प्रचार गर्ने इलाका अझ धेरै बाँकी छ र त्यस कामको लागि यहोवाले योग्य मानिसहरू तयार पार्नुहुनेछ।”
यहोवाले त्यस्तै गर्नुभयो। पोलिश भाषा बोल्ने ती ख्रीष्टियनहरू कोइला खानीमा तनमन लगाएर जसरी काम गर्थे, प्रचारकार्यमा पनि त्यसरी नै लागे। कोही-कोही भने आफूले सिकेको सत्य प्रचार गर्न आफ्नो देश पोल्याण्ड फर्के। फ्रान्स छोडेर पोल्याण्डको ठूलो इलाकामा सुसमाचार प्रचार गर्न गएकाहरूमध्ये तीयोफिल, पियासकोवेस्की, स्टेपेन, कोजियाक र येन जबुदा थिए।
तर पोलिश भाषा बोल्ने थुप्रै प्रकाशक फ्रान्समै बसेर फ्रान्सेली दाजुभाइ दिदीबहिनीसितै जोसका साथ प्रचारमा लागिरहे। सन्‌ १९२६ मा सिन-ले-नोब्लेमा एउटा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यतिबेला पोलिश भाषाको समूहमा १,००० जना र फ्रेन्च भाषाको समूहमा ३०० जना उपस्थित भएका थिए। वार्षिक पुस्तक १९२९ (अङ्ग्रेजी) मा यस्तो लेखिएको थियो, “त्यस वर्ष ३३२ जना पोलिश भाषीहरूले बप्तिस्मा गरे।” दोस्रो विश्वयुद्ध चर्किनुअघि नै फ्रान्सका ८४ वटा मण्डलीमध्ये ३२ वटा पोलिश भाषाका मण्डली थिए।
फ्रान्समा भएका पोलिश भाषा बोल्ने साक्षीहरू अधिवेशन जाँदै। ब्यानरमा “यहोवाका साक्षीहरू” लेखिएको छ
सन्‌ १९४७ मा पोल्याण्ड सरकारले थुप्रैलाई पोल्याण्ड फर्किन आग्रह गऱ्यो। त्यो निम्तो धेरै साक्षीले स्वीकारे। ती साक्षीहरूले फ्रान्स छोडेर गए तर तिनीहरूको मेहनत खेर गएन। त्यसै वर्ष राज्य प्रचारकहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशतले वृद्धि भयो। त्यसपछि सन्‌ १९४८ देखि १९५० सम्म २०, २३ अनि ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गयो! नयाँ प्रकाशकहरूलाई तालिम दिन फ्रान्स शाखा कार्यालयले पहिलो पटक सन्‌ १९४८ मा क्षेत्रीय निरीक्षकहरू नियुक्त गऱ्यो। पाँच जना छानिएकामध्ये चार जना पोलिश भाषा बोल्नेहरू थिए। त्यसमध्ये आन्टोइन स्कालेकी पनि थिए।
फ्रान्सका थुप्रै यहोवाका साक्षीहरूले कोइला खानी अनि प्रचारकार्यमा मेहनत गर्ने आफ्ना पूर्खाबाट पाएको थर नै राखेका छन्‌। अहिले पनि फ्रान्समा थुप्रै विदेशीले सत्य सिक्दैछन्‌। अरू देशबाट आएका प्रचारकहरू चाहे आफ्नो देश फर्कून्‌ या त्यही बसून्‌, तिनीहरूले पोलिश भाषी ती जोसिला प्रचारकहरूको अनुकरण गरिरहेका छन्‌।—फ्रान्सको हाम्रो अभिलेखालयबाट।